Unotaura naMwari Here?
Vanhu vanowirirana vanotaura vose pavanenge vari pamwe chete. Vanogonawo kutaura vose pafoni, nee-mail, kana kuti netsamba pose pazvinoita. Saka kuti tive pedyo naMwari, tinofanira kugara tichitaura naye. Tingazviita sei?
Tinogona kutaura naJehovha nemunyengetero. Asi kunyengetera kuna Mwari kwakasiyana nekungotaurawo kwatingaita nemunhu wezera redu. Tinofanira kuziva kuti patinonyengetera tinenge tichitaura neMusiki wedu, Mwari Wokumusorosoro. Izvi zvinofanira kuita kuti tinyengetere tichimuremekedza zvikuru. Kuti minyengetero yedu inzwiwe naMwari, pane zvatinofanira kuita. Zvitatu zvacho ndeizvi:
Chekutanga, tinofanira kunyengetera kuna Jehovha Mwari chete, kwete kuna Jesu, “kumusande,” kana kuti kumufananidzo. (Eksodho 20:4, 5) Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti: “Muzvinhu zvose kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari nokunyengetera nokuteterera pamwe chete nokuonga.” (VaFiripi 4:6) Chechipiri, tinofanira kunyengetera muzita reMwanakomana waMwari, Jesu Kristu. Jesu pachake akatsanangura kuti: “Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri.” (Johani 14:6) Chechitatu, minyengetero yedu inofanira kunge ichienderana nekuda kwaMwari. Bhaibheri rinoti: “Zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano nezvaanoda, iye anotinzwa.” *—1 Johani 5:14.
Shamwari dzepedyo dzinofara kana dzichikurukura kakawanda sezvinokwanisika
Zviri pachena kuti ushamwari hahusimbe kana munhu mumwe chete ari iye anongotaura. Ushamwari hunosimba kana muchiita zvekukurukurirana, saka tinofanira kubvumira Mwari kuti ataure nesu, tomuteerera paanenge achitaura. Unoziva here kuti Mwari ari kutaura sei nesu?
Mazuva ano, Jehovha Mwari anotaura nesu achishandisa Shoko rake, Bhaibheri. (2 Timoti 3:16, 17) Sei tichidaro? Ngatitii watambira tsamba yabva kushamwari yako. Kana waiverenga, zvimwe ungaudza vamwe uchifara kuti, “Shamwari yangu yati . . .” Inenge isina kutaura newe nemuromo asi inenge yaita zvekukunyorera. Ndozvazvinoitawo paunenge uchiverenga Bhaibheri, Jehovha anenge achitotaura newe. Ndosaka Gina ambotaurwa munyaya yokutanga achiti, “Ndinofunga kuti kana ndichida kuti Mwari andione seshamwari yake, ndinofanira kuverenga Bhaibheri, ratingati itsamba yaakatinyorera.” Anotiwo, “Kuverenga Bhaibheri zuva nezuva kuri kundiswededza pedyo naMwari.” Uri kuita kuti Jehovha ataure newe nokuverenga Shoko rake Bhaibheri zuva nezuva here? Izvi zvichaita kuti unzwe uri pedyo naMwari.
^ ndima 5 Kuti uwane mamwe mashoko ekuti kunyengetera kungakuswededza sei pedyo naMwari, ona chitsauko 17 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.